Semalt विशेषज्ञ: गुगल एनालिटिक्समा बोट यातायात अवरुद्ध एक पटक र सबैको लागि
यदि तपाईं नियमित रूपमा गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सायद आफ्नो वेबसाइटमा गुणस्तरीय ट्राफिक कसरी पाउने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ। जब यो वास्तविक मानव ट्राफिकको लागि आउँदछ, त्यहाँ केहि सर्च ईन्जिन अप्टिमाइजेसन र सामाजिक मिडिया प्रविधिहरू छन् ख्याल राख्न। हालसालै यो रिपोर्ट गरिएको छ कि सामान्य साइटमा सबै ट्राफिकको पचास प्रतिशत बोट्स र नक्कली ट्राफिकमा हुन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि धेरै जसो ट्राफिक बिभिन्न उपकरण र टेकनीकको साथ Google एनालिटिक्सबाट हटाइन्छ।
पहिले, बट्सबाट छुटकारा पाउन यो सरल थियो, र हामी विश्वस्त थियौं कि बट्सले जावास्क्रिप्ट कहिले प्रक्रिया गर्दैन। गुगल एनालिटिक्स आफैंले जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्दछ, त्यसैले गुगल विश्लेषकमा बट्स देखाउन सकिदैन। तर अब, यस प्रवृत्ति परिवर्तन गरिएको छ किनकि ह्याकरहरू पहिले भन्दा धेरै चलाख छन् र तपाईंको वेबसाइटलाई बिगार्न सबै तरिकाहरू थाहा छ। प्लस, jQuery को विस्तार को साथ, एकल र डबल पृष्ठ वेबसाइटहरु र अनुप्रयोगहरू सजिलै ह्याकरहरूले लिन सक्दछन्। आजकल, एक बोटले जाभास्क्रिप्ट र यसका सबै सान्दर्भिक फाइलहरू प्रशोधन गर्न सक्छ, यसैले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स साथै यसका रिपोर्टहरूलाई हानी गर्दछ। उही तरीकाले, यसले वेब ब्राउजरहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ, तपाईंको वेबसाइटहरूमा गैर-मानव यातायात ल्याउने। यदि आजको खोज इञ्जिनहरू र क्रलरहरू जाभास्क्रिप्ट प्रक्रिया गर्दैनन् भने, प्रायः मानव-मानव ट्राफिकबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ, र बोट ट्राफिक चाँडै हटाउन सकिन्छ। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि यो सम्भव छैन किनकि जाभास्क्रिप्ट खोज ईन्जिनका साथै गुगल एनालिटिक्सको लागि अत्यावश्यक छ।
Semalt बाट अग्रणी विशेषज्ञ, अधिकतम बेलले यस सम्बन्धमा केही सहयोगी मुद्दाहरू प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ दुराचारी स्मार्ट बट्स र सकारात्मक बोटहरू छन् जुन तपाईंको साइटलाई र यसको सामग्रीलाई आफ्नै मालिसियस उद्देश्यका लागि क्रल गर्न जारी राख्छ। केहि बोटहरू तपाइँको साइटहरूलाई वेब सर्भरहरूमा विध्वंश गर्न र साइट मालिकहरूको लागत बढाउन क्रॉल गर्दछ।
यो भन्नु गलत हुनेछैन कि गुगल खोज ईन्जिन बट्स गुगल एनालिटिक्सबाट हटाइएको छ, र तपाईंले तिनीहरूको सेटि manहरू म्यानुअली परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दैन। जे होस्, अन्य प्रकारका बोटहरूसँग डील गर्न गाह्रो हुन्छ र निर्देशनहरूको पालना गर्दैन जुन वेबसाइटको robots.txt फाईलहरू, वा मेटा ट्यागमा उल्लिखित छन्। ती तपाइँको वेब पृष्ठहरु मा क्रलिंग मा जारी र तपाइँ भयानक परिणाम दिन्छ। राम्रो बोटहरू, यद्यपि अनुरोधहरूलाई तपाईंको साइट सुरक्षित र सुरक्षित राख्न गुगल एनालाइटिक्सको सर्भरहरूमा पठाउन रोक्दछ। आजका दिनहरूमा, खराब बट्सले सबै वेब ट्राफिकको तीस प्रतिशतभन्दा बढीको लागि खाता बनाउँदछ, Incapsula द्वारा रिपोर्टको अनुसार। यो समाधान पत्ता लगाउन अनिवार्य भएको छ ताकि हामी हाम्रो गुगल एनालाइटिक्स र यसका रिपोर्टहरूबाट खराब बट्सहरू फिल्टर गर्न सक्दछौं। यसले हाम्रो डाटा र हाम्रो वेबसाइट दुबै नक्कली ट्राफिकबाट बोटहरू बचत गर्दछ।
यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ?
गुगल एनालाइटिक्सबाट बोटहरू हटाउन विभिन्न रणनीतिहरू छन्। केहि चीजहरू जुन तपाईंले दिमागमा लिनुपर्दछ:
१. तपाईंले जहिले पनि ज्ञात र अज्ञात बोटहरू हटाउन प्रशासन दृश्य सेक्सनमा बक्सलाई जहिले पनि जाँच गर्नुपर्नेछ।
२.तपाईंले बट्स हटाउनका साथै उनीहरूको आईपी ठेगानाहरूलाई रोक्नु पर्छ।
You. तपाइँ प्रयोगकर्ता एजेन्टको सहयोगमा बट्सबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ, जसले पहिचान प्रक्रिया सजिलो र छिटो बनाउने सुनिश्चित गर्दछ।
यी चीजहरूलाई दिमागमा राखेर, तपाईले आफ्नो साइटलाई सम्भव बट्सबाट सजीलै बचत गर्न सक्नुहुनेछ।